Uma Target yakho kuyinto iPhone, Android and ufuna ukubona ukuthi yini ama abanakho efonini yabo nalokho ama abazenzayo ke ExactSpy-Spy Mobile Video futhi video akhombise yayo sici kuwe.
Bona wonke isiqophi Ukugunda bathathe efonini yabo
Bona wonke amavidyo kliphu efonini kakade yabo
Usekela CGM, SVG, EDC, EPS, PDF, SWF, WMF, XPS, EMF, EMF , EMZ, MP4, WMV, ASF, 3GP, 3G2, M4v, AVI ifayela ngetakhiwo
30MB size ifayela umkhawulo for video ngokushesha ifayela ukulayisha
Kungani You Need To inhloli Imiqophi Yabo
Wonke umuntu uthatha ama on smartphone noma tablet yabo. ExactSpy-Spy Mobile Video capturing feature gives you direct access to these videos anytime you want directly from your ExactSpy online account. ExactSpy futhi ithumba ama efonini yabo ngaphambi nangemva ExactSpy wamiswa ngenxa historical abezindaba feature. Manje wena akudingeki ungalokothi miss amavidiyo ebalulekile efonini yabo sibonga ExactSpy.
Kungani kube nini ukuthole ziwusizo?
Uma ungumzali, kungcono duty yakho ukunqanda menace Cyber ​​izinsongo izingane zakho angase abhekane. Kuthiwani uma benza ama asifaneleki futhi wabelane ngazo nabangani babo? Uyazi ukuthi kungasetshenziswa Cyber-iziqhwaga? Uma umnikazi yebhizinisi, wena nakanjani awufuni abasebenzi bakho ifilimu imihlangano oluyimfihlo ngemva kwakho. ExactSpy ngeke akuvumele ungalandela zonke video egcinwe kudivayisi target, ukukuvumela ukubona yisiphi isimo engadingeki futhi ukumisa it.
← Ukusetshenziswa Qopha Apps